Kedu ihe m kwesịrị iburu n'uche iji họrọ Nkesa m? | Site na Linux
Kedu ihe m kwesịrị iburu n'uche iji họrọ Nkesa m?
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Nkesa, GNU / Linux, Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
A maara nke ọma na n'ime GNU / Linux enwere nkesa maka ihe uto niile, na nke ụtọ niile. Ọbụna ụfọdụ ndị ọrụ na-achọghị iji ha, tinye omume a dị ka nkwarụ na-egosi na ha amaghị onye ha ga-ahọrọ n'etiti ọtụtụ.
Ndị na-agụ ya (na ndị enyi) ndị na-agakarị Ndokwa Know mara, M nwere otu arụnyere taa Debian na echi Archlinux, karịa Anglịkan. Mana nke a apụtaghị na akọwachaghị m ihe m chọrọ. Abụ m onye ọrụ na-enwe mmasị ịmụ ihe na enwere m nnukwu ntụpọ: Itisdị. Mana agaghị m ekwu maka onwe m, yabụ ka anyị laghachi n’isi mmalite
Kedu ihe anyị kwesịrị ime mgbe anyị na-ahọrọ Nkesa? Echere m na azịza mbụ maka ajụjụ a bụ ajụjụ ọzọ (gbaghara redundancy): Kedu ihe m chọrọ site na Nkesa? Dịka ọmụmaatụ, enwere m otu enyi onye nrụpụta. Mgbe anyị na-ekwu maka ya, ọ na-agwa m:
Jiri Mint 9 Mint Linux n'ihi na achọrọ m ịkwalite ogologo oge o kwere mee. Enweghị m ike ịla ya n'iyi site na ịtọlite ​​ihe niile nke usoro m ga-eji. Achọrọ m ihe ọ wụnye iji rụọ ọrụ ma kwụsie ike dị ka o kwere mee. Nwere ike iji Debian lọ, ma nchịkọta m chọrọ anọghị, enwere m ike iji Nyocha Debian, ma enweghị m ike ibute ihe egwu - dịka ọ nwere ike ịbụ - na ihe ga-ada m mgbe mmelite. Mint Linux o nwekwara PPA nke Ubuntu, ebe m na-achọta ọtụtụ ihe bara uru ma ọ dịkarịa ala na nke m, ihe niile na-arụ ọrụ na nke mbụ.
O doro anya na ọ bụ eziokwu. N'okwu m ọ dịghị mkpa ma ọ bụrụ na m wụnye taa Arch o Debian m na-etinye otu ụbọchị zuru ezu iji dozie ya, n’ihi na ọrụ m na-enye ya ohere na ọ naghị achọ oge dị ukwuu. Enyi m bụ onye ọrụ nke kwesịrị ịrụ ọrụ ozugbo na Mint 9 Mint Linux (Ẹkot Ubuntu 10.04) ọ na-enye gị ohere ahụ.
Ma enwerem enyi ozo nke na abughi onye mmepe ma obu onye egwu, na ojiji LMDE (yana Squeeze repositories). Ma nke mbụ, ọ dọpụtara ndepụta nchịkọta ọ chọrọ Ubuntu Studio nke gaara abịa ma ọ bụrụ na ọ bụghị maka inwe nsogbu na kaadị ụda.
Ndị a bụ ihe atụ abụọ doro anya nke mkpa ebumnuche. Ya mere Ihe mbụ anyị ga - eme iji họrọ nkesa bụ, mata ihe anyị chọrọ maka ya. Mana onwere isi okwu ozo, ihe ndi ozo anyi nwere. Ọ bụrụ na anyị nwere 8Gb nke RAM, otu i5 na 500Gb nke disk ohere, ihe ọ bụla ga-adị mma ka anyị, ma otu ihe anaghị eme mgbe anyị na kọmputa anaghị gafere 512 Mb nke Ram Eziokwu?
Ya mere, ihe nke abuo gabu chọta nkesa na-enye anyị ihe anyị chọrọ n'ihe gbasara nchịkọta, mana nke ahụ na-enye anyị ohere ịrụ ọrụ nke ọma na-enweghị ịchụ ihe ngwaike dị. Enwekwara igwu egwu Nkpuchi anya na Gburugburu Ebe Obibi.
Ma ọ bụ ezie na anyị nwere ike iyo ọchụchọ maka Nhazi ezigbo, M ga-ahapụ gị nke atọ na nke ikpeazụ achọrọ ka ị gụọ n'uche, ajụjụ abụọ metụtara: Anyị enwere njikọ goodntanetị dị mma iji nweta ebe nchekwa? Anyị kwesịrị imelite oge niile?
Amaara m ndị mmadụ ka na-eji ya eme ihe Debian Etch, na ọ bụghị n'ihi ụkọ akụrụngwa, mana n'ihi na ụdị ahụ ha nwere ihe niile ha chọrọ maka ọrụ ha kwa ụbọchị, ọ dịghị ha mkpa imelite ihe ọ bụla na etu ihe niile si arụ ọrụ: Gịnị kpatara ya? Ọ bụkwa eziokwu. Mgbe ụfọdụ (ndị anyị bụ ndị na-arịa nsụgharị) anyị chọrọ ịnweta ngwugwu kachasị ọhụrụ mgbe anyị n'eziokwu, ihe anyị nwere ugbu a na-arụ ọrụ zuru oke. Mana anyị anaghị enwekarị ike ịbanye Internet, ma ọ bụ ezigbo njikọ iji budata ha.
Na nchịkọta, enwere 3 ihe kachasị mkpa iji tụlee:
Gini mere anyi ji acho nkesa?
Kedu ihe onwunwe anyị nwere?
Anyị nwere ịntanetị? Anyị ekwesiri ịnweta ebe nchekwa kwa ụbọchị yana debe ụbọchị niile?
N'echiche nke abụọ, aga m agbakwunye ihe nke anọ achọrọ: Obodo na Akwụkwọ. Mana n'ezie, iji rute nke a, anyị ga-agafe nke atọ 😀
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Kedu ihe m kwesịrị iburu n'uche iji họrọ Nkesa m?
Ihe 31 kwuru, hapụ nke gị
Nwoke, echere m na ebe a ka agbanwere ya n'ihi eziokwu ahụ bụ na ị gaghị akwụ ụgwọ n'etiti ihe ndị ọzọ, ma ọ bụghị na ọ gaghị agbanwe nke ukwuu
Ezigbo ederede, a na-adọta m mgbe niile maka ịhapụ ntụgharị, yana desktọọpụ zuru oke maka ọrụ m na-arụ kwa ụbọchị.
Arch + Xfce ma ọ bụ Arch + Gnome ma ọ bụ Arch + KDE. Nhọrọ ị bụ .. 😛
Aga m anwale arch ma emesia, mana na oge a ati adabaghi ​​na gnome ma kde buru oke oke nye m, ma adighi m agugo na o zuru oke. Naanị xfce fọdụrụ.
Xfce Rulez !!! Dị mfe, mara mma, dị mfe, ngwa ngwa ... Kedu ihe ọzọ ị nwere ike ịrịọ?
Nke ahụ ziri ezi, ọ bụ nke m na-eji ugbu a na ọ na-arụ ọrụ nke ọma.
... nweghari ntọhapụ ...
Desktop Full desktọọpụ…
Ka m na-agụ ya, ọ na-adị ka Arch + KDE HAHAHA.
Kde mara ezigbo mma ma zuru oke mana ọ dịkwa oke oke maka m, naanị m bụ onye ọrụ nkịtị, naanị m na-eji laptọọpụ iji kọọ akụkọ, gụọ pdf, ozi na ụfọdụ oku vidiyo na onye ahịa. Ọ bụrụ na m wụnye kde ọ ga-gbanyụọ ọkara nke ọrụ.
HAHA M ka gbanyụọ ọtụtụ KDE, Akonadi ... Nepomuk, anaghị m eji ha, ana m agbanyụ ha iji chekwaa ngwaike haha.
Amaghim ihe kpatara I ji nwe 2 GB Ram ¬¬
Amaghim ihe kpatara I ji nwe 2 GB Ram. KDE abughi ihe “zuru oke”? Gini mere ị naghị eji ya otu o kwesịrị?
Anaghị m eji Nepomuk ma ọ bụ Akonadi, naanị ihe ha na-enye anaghị amasị m, ma nzuzu ma ọ bụ umengwụ m na-agbanyụ ha ... Ahụghị m ihe ọ bụla na-adịghị mma na nke ahụ 0_oU
Ihe ọjọ? Ọfọn, ị naghị eji KDE dị ka o kwesịrị ịdị, dị ka desktọọpụ niile dị.
Oh ee ... yabụ echere m na ọ bụrụ na m nyochaa PC gị, ị gaghị enwe Gnome daemon / ọrụ nwere nkwarụ ziri ezi? bia ... Gnome-Keyring, ma ọ bụ ihe yiri ya? LOL !!!
Know mara na ọ gaghị adị otu a ...
Ọ bụ naanị ihe ezi uche dị na iji 100MB nke RAM (ma ọ bụ karịa) na ihe ndị m na-anaghị eji, ya mere m gbanyụọ ya.
Oops ihe o kwuru…. Gnome gịnị ....? Haber nwa, ana m echetara gị na m na - eji "ọcha" Xfce .. Ọ bụrụ na enwere m ụfọdụ Gnome arụnyere, ọ ga-abụrịrị iwu ndabere nke Xfce ma ọ bụ otu n'ime ngwa m na-eji mkpa. Mana site na Xfce anaghị m ewepụ ihe ọ bụla. M na-eji ya dịka ọ kwesịrị ịbụ 😀
N'okwu m. Arch dị ukwuu maka m.
Ọtụtụ mgbe anaghị m akwụ ụgwọ maka ọrụ ịntanetị m n'oge, ana m achịkwa ịwụnye ma ọ bụ melite Distro m.
Ọrụ na ọmụmụ ihe na mahadum, Enweghị ndakọrịta, ngwanrọ ma ọ bụ nsogbu ngwaike na kọmputa ụlọ akwụkwọ. Ebe ọ bụ na m tụrụ aro ka ị wụnye Arch Linux na labs na ọfịs.
Ọ bụ naanị Arch.
Enwekwara m Nepomuk na Akonadi n'ihi na anaghị m eji ha eme ihe ma nke ahụ apụtaghị na anaghị m eji ike kde eme ihe, anaghị m eji ọrụ ndị ahụ eme ihe, ọ nweghịkwa isi Mee ka ha nọrọ ebe ahụ na-eri akụ. N'agbanyeghị nke ahụ, ike na nhazi nhazi nke kde na-enye m enweghị ike ịpụta na desktọọpụ ọ bụla ọzọ, ọ bụ ya mere anyị ji eji kde.
Ndewo na nnabata na saịtị 😀
KDE na-enweghị mkpa maka Akonadi na Nepomuk, ọ dịlarị zuru ezu karịa Gnome, Xfce na ndị ọzọ ... naanị site na ikwe ka m hazie ihe niile na-enweghị imetụ faịlụ nhazi aka, naanị n'ihi na ọ zuru oke.
Nabata na blog… site n'aka onye ọrụ KDE gaa na to
Ichu m o !!! Ee, ama m, ị ga-aza m Abụ m onye ofufe, abụ m onye ofufe, m ga-agwakwa gị ma ị !!!, ịkpa oke ike adịghị mma n'ahụ JAJAJAJAJA. De gbanyụọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile, echere m, kedu ihe ị ga-eji KDE maka? KDE kwuru nke ọma, hehehehehe.
HAHAHAHA Adịghị m onye ofufe, ana m amata ọtụtụ ihe ọma banyere Gnome2, yana ụfọdụ ihe ịga nke ọma nke Gnome3 na Unity, naanị na m ka na-eji KDE n'ihi na ọ masịrị m karịa.
KDE na-enweghị mkpa maka Akonadi na Nepomuk, ọ dịlarị zuru ezu karịa Gnome, Xfce na ndị ọzọ ...
Abụla onye ofufe. Eziokwu na desktọọpụ zuru ezu dabere na mkpa onye ọrụ. KDE nwere ihe ndị ị na - ejighi, ma otu ihe ahụ na - eme ndị ọzọ. Adịkwala anwuru ma, n'ihi na ị maara nke ọma na iji gbanyụọ Nepomuk, Akonadi na Virtuoso, ị ga-emetụ faịlụ nhazi na / ụlọ ...
Eziokwu na desktọọpụ zuru ezu dabere na mkpa onye ọrụ
Otu ihe enweghị ihe ọ bụla jikọrọ ya na nke ọzọ
Ọ bụrụ na ị ga-ahụ. Ọ bụrụ na ihe ị chọrọ bụ iji chọgharịa ma mee leta site n'oge ruo n'oge na nchịkọta ederede, kedụ ihe ịchọrọ KDE ma ọ bụ Gnome maka? Na LXDE ọ zuru ezu (maka ịghara ịgwa gị Openbox, ihe na-eme bụ na ọ bụghị Desktop Environment)
Ekwenyere m na ha bụ ihe dị iche iche, mana echere m na echiche ahụ bụ ikwu (yabụ ọ ga-abụ nke doro anya) na:
Eziokwu ahụ bụ na desktọọpụ na-eju afọ (n'ihe gbasara oke, mkpa na ọchịchọ) maka onye ọrụ, dabere na njirisi ndị onye ọrụ na-ewere (dị ka ihe zuru oke, dị mkpa ma na-achọ ya).
N'ezie Nepomuk = Virtuous hehe… 😉
Mana ha na-egbochi ọrụ ndị bụ akụkụ nke mpako nke KDE, nke mere ka ọ bụrụ ntụgharị asụsụ ... Na-enweghị Akonadi Kmail anaghị arụ ọrụ ọ bụla, yabụ ị ga-eji onye ahịa ozi ọzọ. Yabụ na ị naghị eji KDE zuru oke. Ọ dị ka a ga - asị na m na - eji Xfce na Gnome panel, PCManFm dị ka njikwa faili na ihe ndị ọzọ .. anaghị m eji Xfce ọzọ ..
Ọ bụrụ na ha esoghị Ubuntu na-emegide! hehe egwuregwu….
... ọfụma m na-aga n'ihu iji ubuntu na xfce ma ọ bụ xubuntu ozugbo, ha na-akwado nrụnye ngwa ngwa iji nwayọọ PC na enweghị intaneti.
Doro anya! Enwere m mmasị na uru X / Ubuntu, ị nwere ike ịwụnye ya ozugbo na PC ochie n'ụlọ na-enweghị ohere ịntanetị.
Chọpụta, ọ bụghị naanị Ubuntu, mana ọtụtụ distros
Ma ozugbo njirisi 1,2,3 na 3.1 zutere, ọ bụrụ na enwere ọtụtụ nhọrọ, olee nke ị ga-ahọrọ? Ọfọn, onye ọ bụla ma ọ bụ, dị ka ntụnye, nke ọ bụla n'ime ha site n'oge ruo n'oge (ebe ọ bụ na ha niile gbanwere na ụdị ọ bụla ma a ga-enwe oge ị ga-amasị otu ọzọ na, n'oge ndị ọzọ, ọzọ).
Ebumnuche 12 iji nwalee Linux Mint 12
Njegharị nke TuxGuitar